Yini oyibiza ngomjaho wamabhayisikili? - Ukuhamba Ngebhayisikili
Main > Ukuhamba Ngebhayisikili > Umjaho wamabhayisikili omgwaqo - izixazululo ezisebenzekayo
Umjaho wamabhayisikili omgwaqo - izixazululo ezisebenzekayo
Yini oyibiza ngomjaho wamabhayisikili?
Umgwaqoumjaho wamabhayisikiliukuqeqeshwa kwezemidlalo ngomjikelezoukuhamba ngebhayisikili, ebanjelwe emigwaqweni egandayiwe. Isitejiizinhlanganoma 'ukuvakasha' kuthatha izinsuku eziningi, futhi kuqukethe izigaba eziningi zokuqala noma zesikhathi sokulingwa ezigcwele ngokulandelana.
Ngakho-ke unebhayisikili futhi uthanda ukuhamba ngokushesha. Ngabe ufuna ukwazi ukuthi ungangena kanjani emjahweni? Mhlawumbe uqhubeka nokuthola ama-KOM noma ama-QOM njalo lapho ushayela phezulu kithi noma umane ulahle bonke abangane bakho futhi mhlawumbe ucabange ukuthi ungakuhle kakhulu kuwo. (umculo we-elekthronikhi) ngenza umjaho wami wokuqala webhayisikili lapho ngineminyaka engu-22.
Lokho sekudala kakhulu manje ngezinga lokuhamba ngebhayisikili elikhokhelwayo, lapho iningi labantu liqala khona njengabancane bese linyuka linyuka. Kungenzeka ngokuphelele ukuqala ukugijima kunoma yisiphi isikhathi. Ungahle ungakwenzi kube ngumpetha, kepha lapho-ke ungakwazi futhi ngeke wazi uma ungazami.
Kunezibonelo ezithile zochwepheshe ababambe iqhaza kweminye imidlalo, isibonelo uKristin Armstrong, owenze ama-triathlons angama-20 ngasekupheleni kuka-20 futhi wawina izindondo ezintathu zegolide kuma-Olympic, okungekubi lokho. Ukucabangela kwakho kokuqala kufanele kube luhlobo luni lomjaho ongathanda ukuluzama? Uma kungumjaho wasemgwaqweni? , okuhle, yilokho okubonayo ku-TV ngeWorld Tour, iTour de France neThe Olympic Road Race ngokwesibonelo. Kuyethusa impela lokho, kepha kunezinhlanga ezingeni likazwelonke nezinhlanga zasendaweni futhi, ngakho-ke qiniseka ukuthi uzama lokhu kuqala.
Kunemigomo, imijaho yomgwaqo yasendaweni kanye nemijaho yamabhayisikili yendawo ongazama. Kukhona nama-Sporteve noma amaGrand Fundos angenamalayisense, okuyimicimbi yokuqala izinto ngobuningi engabanjelwa endaweni noma kude ezindaweni ezingajwayelekile. Kukhona amahembe ezemidlalo osuku olulodwa nezinsuku eziningi, futhi angaba mnandi impela futhi ancintisane kakhulu.
Umjaho akuyona into yakho, kungani ungazami isilingo sesikhathi lapho ugijimisana khona newashi ngasikhathi sinye futhi ngokwethembeka uzizwa usabeka kakhulu? Uma umusha ekugijimeni kungani ungazami nje? konke futhi ubone ukuthi yini oyijabulela kakhulu? Futhi khumbula, iGrand Fundos noma i-Sporteve iyindlela emnandi ngempela yokuthola ukukhahlela komncintiswano nenjabulo yomjaho ngaphandle kokuthenga ilayisense. Uma ufuna ukuzama umjaho wasemgwaqeni isinyathelo esilandelayo ukuthenga ilayisense noma ilayisense yosuku bese unikeza umcimbi ohlukaniswe isigaba isigaba esiphansi, kepha uma wenza kahle uzothola amaphuzu azokuvumela ukuthi unyuse imikhakha futhi ekugcineni uthole uqaphele ngithembe, akekho noyedwa osuka kufezekiso olukhulu noma i-COM yokuthuthuka iqonde ngqo kwinkontileka yokusebenza, kuthatha isikhathi futhi kuthatha ulwazi. Iseluleko sami esihle kakhulu kungaba ukujoyina ikilabhu.
Ngokuyinhloko ngoba abantu bahle, kepha futhi, uzofunda okuningi kubalingani beqembu abangase babe nolwazi oluningi emjahweni, babelane ngamathuba okugibela amahhashi, bazokuthokozisa uma unosuku olubi futhi bazokuthokozisa emsamo, lapho unqoba umjaho. Eqinisweni, abantu ohlangana nabo endleleni bazobaluleke kakhulu ekugcineni kunemijaho oyinqobayo noma oyihlulayo. Ngenze izinhlanga ezimbalwa futhi kufanele ngithi abangani engibenzile ngokuhamba ngebhayisikili babaluleke kakhulu kimi kunanoma yiziphi izindondo engake ngazizuza, umjaho wezokugijima usho ukuthi kuzodingeka ufunde amakhono amasha o konke okwakho Ukuvumela abangani bagibele ekukhuphukeni, kodwa akufani nokunqoba umjaho webhayisikili.
Okokuqala, kufanele ufunde ukuhlasela esikhundleni sokuvele ugibele ngokungaguquguquki. Okwesibili, kufanele ufunde amaqhinga, empeleni anzima kakhulu emjahweni webhayisikili. Okwesithathu, kufanele ufunde ukushayela neqembu, ukusebenzisana kubaluleke kakhulu ekugijimeni umgwaqo.
Lokho abashayeli bamabhayisikili abaningi abalwa nakho lapho beqala umjaho womgwaqo kufana nokugibela i-peloton kwakuyinto eyayinzima ngempela kimi. Kufanele ufunde amakhono okuhamba ngebhayisikili ambalwa uma ungenawo, futhi kufanele uzilungiselele ukuwa ngoba nginovalo lokuthi imincintiswano eminingi yamabhayisikili manje bese ihlotshaniswa nengozi. Ngicabanga ukuthi kubalulekile ukusho kuleli qophelo ukuthi amanye ama-hiccups ongase uhlangane nawo endleleni izinhlanga.
Yebo, angifuni ukuzwakala njengomchithi, kepha ayihlali ibushelelezi, ibheke phezulu. Okokuqala, njengoba ngishilo, ngoba unenombolo enkulu yamandla, lokho akusho ukuthi kufanele uwine yonke imijaho yebhayisikili. Kungase kudingeke ukuthi ubambelele kuso isikhashana ukuze ufunde amaqhinga nokusebenza ngokubambisana ngaphambi kokuthi unqobe ngempela.
Lapho-ke kuhlala kukhona umthetho wokuncipha kwembuyiselo. Uzozwa ukuthuthuka okukhulu impela njengoba ufunda njengoba uya ngokufaneleka, lokho kuthuthukiswa kuzophela njengoba uya uba ngcono futhi uba ngcono. Bese kuthi-ke kukhona amathuba amabi wokuwa nokugula okuyizinto ezizokubuyisela emuva.
Ngiyethemba ukuthi lokhu akwenzeki kuwe kepha vele uzilungiselele uma kwenzeka ukuthi ukujabulele ukuhamba ngebhayisikili futhi uqhubeke futhi ungadikibali, lapho ufinyelela ezingeni elithile kufanele ube seqenjini, kodwa kanjani ukhethe Ithimba elilodwa ukuphuma? Futhi empeleni, uyalikhetha iqembu noma bayakukhetha? Ngenkathi ukuba nebhayisikili nekhithi esezingeni eliphezulu kumnandi kakhulu, lokho akumele kube ukucabangela kwakho okuyisikhathi kuphela engikukhetha ngaso Ithimba elilodwa elifakwe kulo ukuthi babengenalo ibhayisikili elalingifanela no-Onsider ukuthi uma uthatha indlela yokugijima emgwaqeni futhi ube nobucayi obuhle, kungenzeka ukuthi uchitha isikhathi esiningi ungekho ekhaya, uhambela umjaho nomjaho. Futhi akuzona zonke lezi zinhlanga okuzoba izinhlanga ofuna ukuzigijima. Kuzoba izinhlanga okufanele uzigijime ukusiza iqembu lakho noma ozakwabo.
Futhi lokho kuhle ngoba ukusebenzisana kuyingxenye ebaluleke kakhulu yokuhamba ngebhayisikili, kepha uma wenza umjaho oyisicaba eHolland futhi ungathandi ngempela imijaho eyisicaba, noma ukukhuphuka intaba ePyrenees uma uthanda imijaho eyisicaba, khumbula ukuthi konke kuyingxenye umsebenzi. Uma umjaho ukukuyenga, noma ngabe umdala kangakanani, konke engingakusho nakanjani, kuzame nakanjani. Uzoba nobumnandi obuningi, uzohlangana nabantu abakhulu futhi bazokwazi ukuthi uzophelela kuphi? Uma unanoma yimiphi imibuzo mayelana nokujaha, bashiye kumazwana angezansi bese senza konke okusemandleni ukubaphendula.
Siphe isithupha futhi uma ungathanda ukubona indatshana yokuthi ungancintisana kanjani nawe ku-Strava, chofoza lapha ukuze ubone ukuthi ungazithola kanjani i-Strava KOMs.
Yini imikhakha yomjaho wamabhayisikili?
Amaqembu ezakhono nomaizigabayilezi:
Ikati 5 - Abagijimi bezinga lokungena abanokuqala okungaphansi kweshumiizinhlangaukufaneleka kwesipiliyoni.
Ikati 4 - Abagijimi bezinga lendawo.
Ikati 3 - Abagijimi bezinga lesifunda.
Ikati 2 - Abagijimi bezinga likazwelonke.
Ikati 1 - Abagijimi bezinga lomhlaba jikelele.
Izinzuzo - Abagibeli bekati 1 abanenkontileka neqembu lePro elibhalisiwe.
Kusho ukuthini B ekugibeleni ibhayisikili?
IzingaBIjubane lokugibela liyahluka, kephakuyintoimvamisa akusheshi kune-18 mph. Ukugibela kuhlangana kabusha njalo, futhi okunye ukugibela kwe-paceline kungenzeka. Izinga C Ijubane lokugibelakuyintongokushesha. Lokhu kugibela abagibeli abanamandla bokuzijabulisa. g.
Izigqoko zokuhamba ngamabhayisikili ziyinkinga ehlukanisayo. Kunabantu ababathandayo, abantu abangabathandi, abantu ababathandayo futhi abafuna ukubaphoqa kwabanye, nabantu abangabathandi futhi abafuna ukubaphoqa kwabanye. okuhle ngoba uma ngiwa ngejubane eliphansi kungavikela ikhanda lami ekulimaleni.
Kodwa inkinga ngezigqoko zokuzivikela akukhona ukugqoka eyodwa, kodwa ukwenza kube yimpoqo Umthetho Wesigqoko waphakanyiswa yiPhaneli ku-Active Mobility ngonyaka ka-2018. Kodwa-ke, ukuphela kobufakazi abadinga ukuba nabo mayelana nesiphakamiso sokugunyaza ukusetshenziswa kwezigqoko ngu idayari yezokuvakasha yabahlanganyeli abayi-100 abakhethiwe ezingxoxweni zeqembu lokugxila kanye nenhlolovo yomphakathi enezimpendulo ezingama-6000, okunganele kakhulu ekwenzeni inqubomgomo. Kepha ngaphambi kokuba sifike kwizigqoko zokuzivikela, kufanele siqonde ukuthi ngubani othintwa ngumthetho.
Emazweni akhuluma isiNgisi, wonke umgibeli wamabhayisikili ubizwa ngokuthi umgibeli wamabhayisikili, kepha ngesiDashi kunamagama ahlukene ama-2. Eyokuqala i-fietser, umuntu oqhuba imisebenzi ethile ngebhayisikili ukuze asuke ku-A aye ku-B ngendlela efanele ngangokunokwenzeka. Owesibili yiWielrenner, umuntu osebenzisa ibhayisikili ukuzilolonga nokuzivocavoca umzimba, ukuhamba amabanga amade nangejubane eliphakeme.
Abagijimi abaphezulu bavame ukufaka izigqoko zokuzivikela, noma ngabe kudingwa umthetho noma cha. Imigwaqo emikhulu kanye nejubane eliphakeme elihambisana nayo kugcina izigqoko zokuzivikela zenza umsebenzi onobungozi obukhulu. Abantu beFit bangafinyelela ngisho ku-60 km / h ngebhayisikili labo.
Imfuneko yezigqoko zokuzivikela ayibathinti abagibeli bamabhayisikili njengoba kuyinto ejwayelekile. Ngakolunye uhlangothi abakwa-Fietser abafaki izigqoko zokuzivikela ngoba ijubane abagibela ngalo liphansi kakhulu kunalelo lomgibeli webhayisikili. Uhambo olwenziwe nalo lufushane kakhulu, imvamisa luphela kungakapheli imizuzu engama-20.
Imithetho yesigqoko sokuzivikela ephoqelekile inethonya kubacishimlilo.Inkinga nge-poll Njengoba umthetho oyisibopho wesigqoko sokuzivikela uthinta kuphela abagibeli bamabhayisikili futhi awenzi mehluko kubahamba ngezinyawo, ibhasi, i-MRT noma abashayeli bezimoto, indlela yokuvota komphakathi ekubekeleni imithetho iqembu elincane ayilungile indlela yokwenza inqubomgomo. Ukuthi awuzizwa uphephile lapho uhamba ngaphandle kwesigqoko sokuzivikela akusho ukuthi wonke umuntu kufanele aphoqeleke ukuthi asigqoke.
Ngakho-ke, umbuzo wokuthi ukugqokwa kwesigqoko sokuzivikela noma cha kufanele uphathwe ngokufanele njengesinqumo somuntu siqu kunokuba ucindezelwe. ISingapore inesimo esiyingqayizivele lapho ukuhamba ngebhayisikili ezindleleni zezinyawo kuvunyelwe ngejubane eliphezulu le-10 km / h. Ingqalasizinda yamabhayisikili iyatholakala, kepha njengoba isashoda ezingxenyeni eziningi zesiqhingi, ukusebenzisa indlela yezinyawo noma umgwaqo kuhlala kuyindlela eyodwa kuphela.
Ucwaningo Lwezingane Uma ufuna ukwazi kabanzi ngokusebenza kwezigqoko, uMikael Colville Andersen uchaze kahle. Izixhumanisi zenkulumo yakhe ye-TED encazelweni engezansi. Amathuba okuba ne-TBI ngenkathi ushayela, ucwaningo lwendawo oluhlaziya idatha phakathi kuka-2011 no-2016 luthole ukuthi cishe ukulimala okungu-4 koku-5 kwenzeke ngaphandle komgwaqo.
Ukulimala ekhanda kubanga kuphela i-12% yakho konke ukulimala, okungaphansi kakhulu kwe-33.7% ezincwadini. Lokhu kusho ukuthi amathuba okuba nomuntu ophethwe yi-SHT ngenkathi ehamba ngebhayisikili emgwaqeni mancane kakhulu.
Ngokuphambene nalokho, olunye ucwaningo lwango-2006 luphethe ngokuthi ukwenyuselwa izigqoko zokuvikela ikhanda kufanele kubhekiswe kwabangewona abahlali nakwabagibeli bamabhayisikili asebekhulile, ngesicelo sokwenza isigqoko sokuzivikela siphoqeleke futhi sibhekise kubashayeli abashayela bedakiwe. Izithombe zezigqoko ezigqokiwe ezinkundleni zokuxhumana zibonisa ukuthi zingathuthukisa ukuphepha, nakubantu abasindiswe yisigqoko sokuzivikela noma abakhubazeke ngokulimala ebhayisekilini, kuyaqondakala kakhulu ukuthi noma yini ebingavimba le nhlekelele iyathandeka ngakho-ke isigqoko sokuzivikela umthetho ungamukelwa. Kodwa-ke, ekusebenziseni imithetho enjalo, ezinye izinto kufanele zinakwe ngezinga elikhulu.
Ngokwezibalo zamaphoyisa omgwaqo, bangu-9 abantu ababulawa behamba ngebhayisikili ngonyaka ka-2019. Kodwa ngawo lowo nyaka, bangu-6 090 abantu ababulawa ngumdlavuza kwathi abangu-5,018 babulawa yisifo senhliziyo. Ukuhamba ngebhayisikili kudlala indima enkulu lapha, njengoba ukuhamba ngebhayisikili okusebenzayo kukhonjisiwe ukunciphisa izehlakalo zomdlavuza ngo-45% nesifo senhliziyo ngo-46%.
Iphaneli lithi ukubeka umthetho onjalo ongekho emgwaqeni kunganciphisa ukuthathwa kokuhamba okusebenzayo, kepha uma nje umuntu egibela ibhayisikili, ukushayela nge-10 km / h kumane kuhamba kancane kunanoma iyiphi injongo ephathekayo, futhi ukushayela ngesivinini kusengozini ohamba ngezinyawo kuphela. Ngisho noma indlela yezinyawo igcwele ngokweqile, iphukile noma inezinguquko eziningana ekuphakameni, umuntu usaphoqeleka ukuhlala futhi angasebenzisi umgwaqo, noma ngabe kucacile. Lokhu ekugcineni kuholela esimweni esibi sabahamba ngezinyawo nabahamba ngamabhayisikili.
Abantu abagibela amabhayisikili baphoqeleka ukuba bagibele ngejubane lomnenke elingu-10 km / h noma ngabe umgwaqo oseduze awunalutho, futhi njengoba izindlela zezinyawo zingakaze zenzelwe ukuhamba ngamabhayisikili, abantu abaningi baphoqeleka ukuba bahambe ezindleleni zezinyawo ukuthi izinto ziba zimbi kakhulu abahamba ngezinyawo. Yebo, abashayeli bayasizakala ngakho - ngoba lapho nje umgwaqo usucacile kubagibeli bamabhayisikili abacasulayo, bangahamba kamnandi ezindaweni zokuhlala ezinama-50. Abantu abahamba ngebhayisikili ngenxa yengqalasizinda ekhona, kepha yize kunengqalasizinda .
Ukusebenzisa umgwaqo kufaneleke kakhulu uma indlela yezinyawo igcwele. Ezingeni le-anthropological, izifundo eziningana ezihlola amazwe anemithetho yesigqoko esiphoqelekile njenge-Australia, New Zealand neCanada zithole ukuthi abukho ubufakazi bokuthi izigqoko zokuzivikela zenze ngcono ukuphepha jikelele. Ekhuluma ngobungozi, imithetho yesigqoko sokuvikela ikhanda ithinta umbono womphakathi wokuhamba ngebhayisikili njengomgwaqo oyingozi kakhulu kunawo, ikakhulukazi lapho uhlobo kuphela lwabantu abahlala emgwaqweni bekwenza lokhu ngejubane eliphezulu nakwezemidlalo kusuka ku-A kuye ku-B, njengo-anti ohambayo esitolo, umalume othenga i-TOTO, ibhungu eliya esitolo se-prata nezingane zesikole ezihlanganisa imayela lokugcina lohambo lwazo umgomo ngoba uvele unamathele njengesithupha esibuhlungu.
Iqiniso ngukuthi ukuphepha kwabantu kungaphakathi futhi abantu bayazi ukuthi yini ezwa kangcono kubo futhi balungise uhlobo lokuhamba ngokufanele. Ngenxa yalokhu, awusoze wamthola u-anti kuMamamachari eBartley Viaduct, ingane yesikole egqoke izingubo zesikole ibhomu iMount Faber, noma umalume ohamba ngemigwaqo yezitimela ngaphandle kokuthi uSerangoon Road ungomunye umgwaqo futhi akayona enye iChoice ephoqelelwe, bambalwa abantu bagibela amabhayisikili abo emgwaqweni bengenazo izigqoko zokuzivikela. Lokhu kwenze ukuthi imigwaqo ingagcwali kakhulu ngamabhayisikili, kodwa okuxakayo wukuthi kwenza ukuhamba ngamabhayisikili emgwaqweni kungaphephi nakakhulu.
Abaphenyi bakhombisile ukuthi lapho abantu begibela ibhayisikili ngokwengeziwe, kulapho abantu bezojwayela ukubona, okuholela emigwaqweni ephephile kuwo wonke umuntu. Okuhlukile kwenza imigwaqo ibe yingozi kakhulu, ikakhulukazi kubasebenzisi abangenakho okunye ngaphandle kokusebenzisa indlela yezinyawo, njengasemgwaqweni. B.
Abagibeli be-E-bike. Iphaneli lithi izigqoko zokuzivikela ziyadingeka ngoba “Abagibeli bamabhayisikili bahamba emigwaqweni enezimoto ezinkulu, ezisheshayo futhi laba abasebenzisi abasesichengeni kakhulu. Uma kwenzeka ingozi, ukufaka isigqoko esiqinile kuzonciphisa umthelela nokulimala komshayeli. ”Kodwa-ke, lena indlela engenaphutha kwezokuphepha emgwaqeni ngokumane ususe ababuthaka.
Ngokwalo mqondo, izigqoko zokuvikela ikhanda akumele ziphoqelelwe kubahamba ngezinyawo, njengoba besengozini enkulu emigwaqweni nasezindleleni okwabelwana ngazo futhi ingabe yiqembu elinezingozi kakhulu zomgwaqo noma abashayeli, njengoba limele iqembu elikhulu kakhulu lokulimala kwengqondo okulimazayo? Ngomthetho ophoqelelwe weHelmet, esimweni esingalindelekile sokuthi umuntu abulawe ngebhayisikili engenaso isigqoko sokuzivikela, umkhuba wokusola abezindaba nomphakathi ubuzophikelela kakhulu kunakuqala - kube sengathi ubuhlungu nokuhlupheka bekufanele kungagqokwa isigqoko se-styrofoam. Lokhu kukhombisa ukungazweli kwamaphoyisa kaTraffic kuFacebook kuputshuke ngosuku olulandelayo ngemuva kokuthi umshayeli weloli ebulale umfana oneminyaka engu-14 ubudala obehamba ngebhayisikili Ezingozini zomgwaqo, ukuhamba ngebhayisikili kuvezwa njengomsebenzi onobungozi futhi oyingozi, ne-PPE idunyiswe njengelithuluzi kuphela lokuthuthukisa ukuphepha. Noma njengoba uJay Foreman asho: ukuzikhulula kuwo wonke umthwalo wokuphepha kwabagibeli bamabhayisikili ezimotweni.
Inkinga enkulu ehambisana nokugqoka isigqoko sokuzivikela ukufinyeleleka. Ngenxa yalokhu, izindawo eziningi eSingapore kunzima ukufinyelela kuzo kubantu abangashayeli imoto, okubalelwa ku-89% wabantu. Akuzona zonke izindawo eSingapore ezinendlela yezinyawo noma ezinikezwa izithuthi zomphakathi.
Ezindaweni ezinjalo, ibhayisikili ukuphela kwendlela yokuhamba esebenzayo. Ezindaweni zasemakhaya njengeSerangoon Gardens, izindlela zokuhamba zincane kakhulu ukuthi ungashayela kuzo. Linda, akuyona nje i-Serangoon Gardens kuphela, kuyefana cishe kuwo wonke amafa engike ngaya kuwo! Futhi akunangqondo ukudala imizila yamabhayisikili lapho njengoba imigwaqo ingenalutho! Ngokuqondene neNeo Tiew neLim Chu Kang, amapulazi nezindawo zokudlela ezinhle akutholakali ngokuphelele kulabo abangenazo izimoto eziguqukela ezindaweni ezingomakhelwane, yize bexhunywe yimigwaqo ethulile nezindlela zebhayisikili ezilula.
Lokhu kuhlotshaniswa nezindleko zezomnotho, njengoba imoto eyodwa eyengeziwe ingezwa esiminyaminyeni sezimoto kanye nezindleko zemvelo ezivela emfuthunjini wemoto. Kubantu abangenabo ibhayisikili, akunangqondo ukuthenga isigqoko sokuzivikela, ukusigqoka usuku lonke, ukugibela ibhayisikili kanye kuphela okungadluli imizuzu eyishumi. Kungani izakhamizi zincishwa inkululeko yokuhamba izingxenye zebhayisikili labo? Izwe elinezinye izindlela ezisebenzayo ngaphandle kwemoto? Ngenkathi ngifunda esikoleni samabanga aphakeme, ukuhamba ngebhayisikili emigwaqeni ethulile kwakuyindlela esheshayo yokuthola mina nabanye abafundi abaningi kusuka eMRI ukuya esikoleni, njengoba zazingekho izithuthi zomphakathi i-nsportnearby.
Uhambo aluthathanga ngaphezu kwemizuzu engu-5 futhi belulula. Kwakuvame ukuba namabhayisikili angaphezu kwama-30 ngaphandle kwesikole, kepha lapho ngibuya ukuzobona i-alma materin yami ngonyaka ka-2021 yayingaphansi kuka-5 ngaphandle! Ngingavula ibhayisikili futhi ngihambe, kodwa ngizibeka engcupheni yokubanjwa. Izinhlawulo zokwenza lokhu azihlekisi neze.
Uma ngishayela umkhawulo wejubane ophindwe kabili kulo mgwaqo womakhelwane (40 km / h), inhlawulo ingama- $ 300 no-8 ukwehla. Kepha uma ngigibela ibhayisikili lami emgwaqweni ofanayo ngaphandle kwesigqoko sokuzivikela, ngingahlawuliswa imali efinyelela ku- $ 1000 kanye nesigwebo sezinyanga ezintathu ejele ngecala lokuqala. Kuyahlanya ukuthi ukufaka isigqoko sokuzivikela okungalimazi abanye kudinga ukuboshwa, kanti ushayela ngesivinini esiphindwe kabili esingahle sibulale izimpilo kujeziswa inhlawulo kuphela.
Angisiqondi isizathu sokuthi kungani okuthile kuphephile ngokwemvelo futhi kwenziwa ubugebengu, noma ngabe ayikho inhlawulo noma umthetho ungaphoqelelwa, zibalulekile uma kwenzeka ingozi njengoba zingasetshenziswa ukuthola iphutha nesikweletu. Futhi, amazwe agunyaza izigqoko zokuzivikela anezilinganiso eziphansi zokuhamba ngebhayisikili, ngakho-ke kungani silandela ngokungaboni? kuthiwani uma umgomo ukwenza ukuhamba ngebhayisikili kudume kakhulu? Esikhundleni salokho, kufanele sibheke amazwe aseYurophu anezinga eliphakeme lamabhayisikili futhi sihlaziye ukuthi amukelwa kanjani yipolitiki. Esikhundleni sokujezisa abantu ngokungasigqoki isigqoko sokuzivikela ngenkathi uhamba ngebhayisikili, abanye ohulumeni abaningi babona izinzuzo zezomnotho nezempilo ezihambisana nokwethulwa kwamabhayisikili njengendlela yokuhamba futhi bakhetha ukutshala imali kumabhayisikili, njenge-UK Cycle Scheme, kuze kufinyelele kuma-39% we. Kuyafaneleka futhi nombuzo wokuthi uma imfuneko yesigqoko sokuzivikela esiyisibopho yenza ngcono ukuphepha kaningi, kungani amazwe angaphezu kwamaphesenti angama-90 elandela? IMexico, ebinomthetho ophoqayo wesigqoko sokuzivikela kumabhayisikili, uyiqedile ukuze ikhuthaze ukusetshenziswa kwamabhayisikili futhi ithuthukise ukuqwashiswa okungcono kokuphepha kwamabhayisikili.
Amazwe asenemithetho eyisigqoko yesigqoko sokuzivikela awasebenzisi kuwo wonke amaqembu eminyaka. Isayensi ikhombisile ukuthi isilinganiso senzuzo yezindondo zezigqoko sikhulu kakhulu kwentsha eneminyaka eyi-10-16. ISlovakia, iSouth Korea neSweden bayisebenzisela kuphela abashayeli abangaphansi kweminyaka engu-15, futhi akukho lapho emhlabeni wonke ongasigqokanga isigqoko sokuzivikela ethethelela isigwebo sezinyanga ezintathu ejele kunokulimaza okuhle.
Uma kungekho mininingwane yezibalo noma ubufakazi obukhombisa ukuthi ukunqunywa kwesigqoko sokuzivikela ezingeni lomphakathi kunenzuzo ephelele kwezempilo nakwezomnotho, ukugcina nokuphoqelela umthetho onjalo ekugcineni kuzomosha izimali zomphakathi ezinikele ekusetshenzisweni kangcono ukuvikela izingozi kungaphambukiswa. kufaka phakathi ukubeka ibanga elincane lokudlula labashayeli abadlulayo, ukwehlisa isiminyaminya emigwaqeni eseduze, ukunciphisa ijubane libe ngu-30 ezindaweni, izindlela ezihamba ngezinyawo eziqhubekayo noma i-hoofdnetten ukuze kuqhutshekwe kunciphise ukubambezeleka kwabantu. Ukuhamba ngebhayisikili kungumsebenzi ophephile ngokwemvelo, futhi yimvelo okwenza kube yingozi.
Yimvelo okufanele iguquke, hhayi umsebenzisi. Ngenkathi ukwakhiwa kwengqalasizinda yokuhamba ngebhayisikili kuthatha isikhathi futhi akuyona yonke indawo efanelekile, ukusetshenziswa kwamabhayisikili akumele kwenziwe kube nzima kakhulu ukukhuthaza ukwamukelwa kwebhayisikili njengendlela yokuhamba. Umthetho wesigqoko sokuzivikela ungenye nje yenqubomgomo yokusola izisulu eyenza indlela yokuthutha esebenza kahle futhi esimeme ihambe kancane, ingakhangi futhi ingasebenziseki esimweni esiphuthumayo, okuphambene nombono we-auto-lite esivame ukuzwa ngawo.
Le yindlela imigwaqo yethu eyayivame ukuba ngayo - ukuze abantu baphume bayojabulela futhi bezwe umoya ezinweleni zabo. Lokho okwenziwa yilaba bantu okungalimazi abanye manje sekuyicala lobugebengu. Kufanele sikukhuthaze ukuthathwa kokuhamba okusebenzayo ngokusebenzisa ingqalasizinda esivele ikhona, futhi isinyathelo sokuqala sokwenza lokhu ukwamukela abantu ezindaweni zabo zangaphambili.
Imigwaqo yakhelwe abantu, hhayi izimoto. Akukho lutho olungalungile ngokugqoka isigqoko sokuzivikela, uma ukhululekile ukusigqoka bese usenza, kodwa masibe nenkululeko yokuzikhethela, njengawo wonke umhlaba nokuthi wawunjani eSingapore kungekudala kakhulu ngifuna ukubonga uFrancis Chu ngokunginikeza izithombe zabantu abenza isamanisi uma benza okufanayo namuhla, futhi uma ufuna ukusekela inhlangano yokuchitha umthetho oyisibopho wesigqoko sokuzivikela ungasayina isicelo sokukhombisa ukwesekwa kwakho. Xhumanisa ebhokisini lezincazelo elingezansi, uma ufuna ukubona izindatshana eziningi ngokuhlelwa kwedolobha kanye nethrafikhi ungabhalisela isiteshi sami.
Kusho ukuthini ukukhathazeka ngokuhamba ngebhayisikili?
Ukubamba- umgwaqo ohamba kancane. Kungaba ubuso bayo, isimo sendawo. Noma umgibeli! Kubethelwe / kunamathelisiwe / kunamathele emgwaqweni. Uwoyela up / down -alutho kuyenzaenamafutha noma ukuphakama kodwa imoto ngemuva noma ngaphambili.UMar 9 2009
Yebo ngangifana nentokazi, into esabekayo engake ngayenza empilweni yami yonke ngoba angikaze ngibe nezinwele noma into esabekayo owake wayenza empilweni yakho yonke kulungile yebo kulungile-ke nasi isimo, engishayela kuso ngamasondo Ngifunde i-env 120 Lambos Kade sahlala kuyo futhi iningi lenu selivele liyakwazi lokho kodwa namhlanje akusho ukuthi kungamasondo kaLambo ngoba angifuni ukucekela phansi amasondo ahambisanayo, sinawo la masondo womabili womabili amadala kuphela anamasondo futhi womabili aboshiwe, i-D-hopping encane kodwa sizothenga lezi zinto ziyisicaba. Sizobona ukuthi ngubani ongathola i-flatspot enkulu kunselelo yanamuhla ye-flatspot ngaphambi kokwenza empeleni zonke lezo zinto. Nginesheke ukubona ukuthi izandla zami ziyasebenza yini.
Ngakho-ke ungahle ungazi kahle ukuthi ngiqonde ukuthini ngokwenza izandla zami zisebenze ngayo. Isizathu sokuthi ngisho lokhu yingoba anginasiqiniseko sokuthi bazosebenza kahle kangakanani njengamanje, ngoba ngisanda kushayisana kakhulu ebhayisikilini lami futhi ngiphakamise izintende zezandla zami zombili, idolo lami neqakala. Kwakungesona nje isimo esihle, kepha njengenjwayelo, ungifisela inhlanhla.
Sizoqala ngokudlulisa okungu-5 kuye ku-8, konke kucacile. Ngikhombise ukuthi sengiqedile. Ake sibone iBig MikeDan uqashe uSteve, makhosikazi, Madoda, uSteve uvele wathi ungaba ku-8 ngakho-ke sizokwenza lokhu: Ngakwesokudla.
Ake sibheke inqubomgomo yabahlaziyi be-dudeLadies ukuze sizibonele mathupha ukuthi ichithwa kanjani manje. Ngakho-ke ngaphambi kokuzibulala ngizothola umugqa. Kulungile, ngakho-ke nayi indlela yethu okwamanje.
Vele ihlale ipholile uma kuqhathaniswa nalesi sikhali sobambo bese senza lokhu ngokhuni lwangaphambili olungama-270 270 bese sizama ibha efana noManny ngaphezulu kwebhokisi. Kulungile kuqale ngokulunga, kepha konke kuhle. Ngakho-ke ake sinikeze ama-270 ngaphambili Kwenze.
Manje. Kufanele uzame ukufana nendoda yenkantini encane. Ayimtholanga uManny, kodwa uzozama futhi.
Okunye futhi, cha, uyazi, ngithi mfo, ngikwenzile lokho kubukeka sekwenziwe, ubuso bami bokudlala buphelile. Nasi isivumelwano uma ngifika eManny Barspin Land bese ngiphenduka ngiye ngqo kuManny Unomoya abakukweleta wona, kuthiwani ngokubhekana noma ukufuna ukusondela? O, qaphela, uyakwenza manje, kuzame ngomoya, uyakupheka. Ngeke ngizame.
Hheyi, uzoba ngufakazi uma ngifaka lokhu, uma ngifaka le bar Manny bese ngenza udonga ngayo, kufanele abambe owesishiyagalombili ngokungabaza. Ubonile kahle? Ngingufakazi, nginentshisekelo yokubona ukuthi uSteve angahlala yini. Yindaba ephuma emoyeni ngicabanga ukuthi uyakwazi, kodwa angizami, kuzothatha Lokhu kuhle impela Cha ukulindile.
KULUNGILE. Ngakho-ke lokho kwenza muphi umqondo, uRaymond Double noma lutho? Ngakho-ke ungazama kabili ukungibulala, ngokuyisisekelo kuyasebenza. Yebo, kabili yebo.
Yebo, kepha uwuphazamisile nje lo mbono, hhe, usho kabili noma lutho? Cha, kubuhlungu kakhulu ukuthi isandla sami siqonde phansi sibuhlungu kakhulu. O, lokho kwaqala njengokuhlehlela emuva, ngangizama ukuzisindisa ekubuyeleni emuva Lokho kwangifikisela phambili kakhulu kunalokho ebengikulindele futhi ngavele ngafaka isandla sami phansi futhi lokho kwaba sengathi babedidekile bobabili, kodwa lokhu esinye sasibi kakhulu. Ngakho-ke lokho akuzange kumnandi Ngakho-ke ngicabanga ukuthi sengiqedile ngokugibela isithuthuthu sosuku kodwa nokho iFlat Spot Challenge okufanele uyenze ngibone womabili amasondo engingakwazi ukuwafaka esondweni elingemuva lesikuta sami Lapho wena ungathola abanye abantu Manje ngena endaweni yokupaka engezansi kwegquma ubone ukuthi ubani othola indawo eyisicaba enkulu kunazo zonke, futhi kungazelelwe ungahamba uye ezansi egqumeni bese ushaya nje amabhuleki bese ubuka nje kuzokukhombisa ukuthi isalinde lokho Steve yenza umoya wayo.
Ake sibheke ukuthi singakwazi ngempela ukukwenza noma cha. Ucabangani kuSteve OhNoHero man, hey, ngizokunikeza noma kunjalo. Ngikunika lona ngoba nje ngingumuntu omuhle.
Kuyathuswa kancane lokho owake wakwenza empilweni yakho yonke, kulungile yebo, kulungile-ke ake sishintshane ngamasondo manje ngizofaka elilodwa kuphela futhi lizoba ngemuva kuphela ngoba asikho isizathu sokubeka esinye phambili oh nkosi yami. SineHellcat esanda kungena, simtholele uSteve Hey, yamenza wagxila kuyo yonke into, asihambe. La mabhayisikili angama-110s.
Ngakho-ke incanyana ngakho kuzoba negebe elithe xaxa phakathi kwebhuleki langempela phezu kwesondo inqobo nje uma lelo bhuleki lisebenza, elizokwenza nakanjani uma kungenjalo, ngiqonde ukuthi lokho kungcono kakhulu kunamasondo angeziwe abomvu ngqo noma kwesokudla okuluhlaza okwesibhakabhaka kuqala Ukhetha ini okwesibhakabhaka okusawolintshi? Njengokugenca okuncane kuwe. Mhlawumbe kufanele senze i-athikili ngakho. Ukulondolozele lokho ku-GTR.
Yebo, ngicabanga ukuthi amasenti angama-50 mubi manje. Sifakwe isondo manje ukuthi ngingubani mina kuqala ohamba kuqala ngingahamba kuqala uhambe kuqala uhambe kuqala bese ufuna ngikwenze. Ngizokuchitha impela lokhu.
Ngibona uRaymond edinga indawo eyisicaba embi ukubuyela ngaphezulu kwamabha ngoba kuyadida lokho. Yilokhu engikudingayo bafana kufanele ngihambe amabha ngijabule ngokwengeziwe ngokwesibili, uyazi okwesithathu kwethu ngesonto Kulungile, ngakho-ke ngicabanga ukuthi siqala lapho siqala khona kulowo mugqa omnyama khona lapha Ngakho-ke unejubane Bump bese uqala kwesokudla kukhona okuqhamukayo Ngakho-ke lesi yisiqalo sethu khona lapha Lona umugqa omnyama esingaqala kuwo, ungaphakama ufike lapho ufuna khona, egqumeni Akusilo igquma elikhulu kakhulu, empeleni igquma elincane elihle kepha lelo igquma noma kunjalo ophumelele umcimbi namuhla uthola le chick-fil-imoto angazi ukuthi cishe inamadola amane kangakanani kuyo ngakho-ke ingahle yanele isemishi kungahle kungabi kuhle kakhulu kungafana nekota Kodwa noma kunjalo Wena thola ikhadi Uthola ukuziqhayisa ngokuthi unekhadi Ngizoqala leli thuba lesikhathi esisodwa lokungisebenzisa, bese uhamba noSteve's Sizoshintshela kwelinye isondo eln ukuze sikwazi ukuqhathanisa ukuthi ubani isondo elikhudlwana, bafethu, nansi iFlat Spot Challenge ezansi ingabe labo abangamazi uRaymond baqala lapho kulayini omnyama. Ngakho-ke ake sidlule ku-bump speed futhi ne-boom iyeza.
lapha. Uyeza uRaaah angicabangi ukuthi wenze umsebenzi omuhle kakhulu Wenze kanjani lokho kungcola kwaba nobunzima mfowethu angicabangi ukuthi kunezindawo eziningi kakhulu eziyizicaba zokuthola indlela yokungena ekulandeleni i-jet tech. Uhlola ini? Oh oh.
Kukhulu kancane. Kulungile. Ake sibone ukuthi kumnandi yini.
Awukaze, ngiyaphinda futhi. Ngakho-ke lokho kuzoba umzuliswano wesibili. Ukuqiniseka nje, kuhle kakhulu, manje sekufanele sihambe, kwesinye isikhathi uyahamba, ngakho-ke isikhathi sakho - yebo, isikhathi sami - yebo, ngaphandle kokuthi ngiyibhubhise okokuqala, ngiqonde ukuthi uma uyichitha bekuyimoto yokuqala futhi leyo uze uthole indawo eyisicaba ongayenza njengengane encane inqobo nje uma sizwa ukuthi uyiphumelela kahle kodwa kuzofanele ngenze imanuwali ngemuva kwalokho ukuze ngibone kungekho sizathu esifanele ebengifuna ukusho ukuthi angikwazi umuntu osevele ilahlekile lapha.
Uyeza. O cha, oh kuhle lokho, yibhola le-potts, yilokho okufanele libe yikho. Ungacabanga ukuthi awunayo indawo enkulu eyisicaba.
Kukhona indawo eyisicaba noma kunjalo, kepha akuyona enkulu kangako eduze kwami. Ngabe ubona kanjani Yebo khona lapha. Akuyona iphuzu eliyisicaba, lihlala likhulu kakhulu njalo.
Mina - ngokwethembeka, ngakho-ke uma ngigingqa iBi Bing uzozizwa nakanjani. Noma kunjalo, ithuba likaSteve, unamathuba amabili uSteve, uma ukwazi ukushaya isondo lami, uzowina. Kulungile, yebo, ulungile mnumzane.
Ngibona kakhulu. Bafowethu. Okwamanje kukhona ukhiye wakho we-Allen noma isikrufu sakho sesokhethi.
ibhasikidi lesipho somgibeli
Anginankinga. Uyabona ukuthi ushintshela kanjani kwelinye isondo manje. Ngakho-ke leli yisondo engibambelele kulo ngizobamba leli ukuze ngiqhathanise phakathi kwalokhu okubili.
Nali ibhayisikili likaSteve njengamanje, uSteve. Ngiyilokho okuheha ngokucophelela leyo nto enye i-10% kude, mfo. Ngangihamba ngokushesha, ngingumngane.
Ngifana nedola elingamashumi amahlanu kuwe. Ngisho ukuthi lokho kuyiqiniso, kepha noma kunjalo, bengisashayela ngokushesha ngicabanga ukuthi le kuzoba indawo enkulu ethe xaxa. Lapho ngishibilika, ngamangala ukuthi kwakungekho okuningi.
Yilokho okushiwo lolu hlobo lokukhohlisa. Kepha kuyikho. Ngangiwulungele umhlangano.
Sengizothola i-chick-fil-a chick-fil-a. Esinye esimi ngokulandelana sikulungele ukuhamba, ubeka nje i-asi yangemuva futhi uzama ukuqinisa yonke into. Sawubona ndoda ngicabanga ukuthi uzowina kodwa.
Ngingu-100%, empeleni ngilixegise kancane, ngakho-ke ibhayisikili lihamba ngokushesha ekuqaleni futhi bengingamisa ngokushesha. Hheyi wenza noma yini okufanele uyenze ukukopela. Ngikwazi kahle, ngicabanga ngobuqotho ukuthi bengithanda ikota yebhayisikili ihambile ngokuphelele, kodwa ungakhathazeki.
Ayikho inkinga enkulu. Ngiqonde ukuthi uSteve, angayisusa, ungaweqa amabha manje. Ungabukeka njengami ngebhayisikili Ngakho-ke ngenyukele lapho ngivela ophawini lokuma uSteve Ngakho-ke uma ufuna ukusuka lapho kungenzeka ukuthi lena indawo enhle kunazo zonke, okungenani ugqoka amagilavu ​​wakho lapho ushayela ngaphezu kwamabha, kwasiza kancane, noma usho kanjalo? Cha Cha, lokho kuzolinda.
Yebo kwenzekile. Lokho bekungaba ngumunwe wami. Ukube bengingenawo amagilavu ​​ami, vikeleni izandla, bafethu, yingakho ngigqoka amagilavu ​​lapho ngenza lokho okuyikho.
Ngiyakwenza lokho, kuyadonsa impela, kodwa ngenhlanhla yilokho engikuhambile, lokho empeleni futhi ngisawujabule umunwe wami wonke noma kunjalo, kulungile Steve masseuse, uwena uyethuka uyesaba, unezingu-120 ngaphambili nayo yangena ngemuva. Ngibukeka ngimuhle ngandlela thile. Kufana nokuthi ngiphansi, mfowethu.
Uyabona laba bagibeli bezindonga abathanda le mishini yokubhoboza amandla kagesi futhi bayajikeleza. Kulungile, Steve. Bona ukuthi unani, mfo.
Kulungile Steve kubathathu okubili eyodwa hamba uyivumele ingene. Kungcono uqale ucindezele. Nakhoke.
Ithiphu likaSteve lokuqala leFlat Spot Challenge Well, oh mfowethu, bheka ugalikhi, ubone ukuthi kudumaza kanjani ukuthi ngiphoxeke kakhulu, kufana nento encane kakhulu, yebo, incane kakhulu ukuthi ufuna kanjani lokho ofuna ukukuzungeza nawe ngokushesha kuma-geek. Bengingaqondile ukudla okulula. Gqoka umuntu, ake siqale futhi ukungayi.
Ngiyazi mfowethu uhlangothi lokugcina lomgwaqo uma uhamba uqala ukuphusha lapho nina nihamba. Baba. Woza.
Uyitholile, umzuliswano wokuqala ngoba uSteve akahambanga ngendlela abeyihlelile futhi ibingahambi ngendlela ebengiyihlelile, ngathi ayihambanga kahle ngenkathi ngikhona okokuqala futhi bengicabanga ukuthi uSteve uzokwenza okuningi kodwa uSteve wenze umzuliswano wesibili. Inendawo elula eyisicaba. Ngokuyisisekelo, benginakho ekugijimeni kwami ​​kokuqala.
Kodwa usekulungele ukuhamba ngoba uvele wangithethisa, ake ashayele ezungeze manje. Leli lizinga lesibili likaSteve kwiFlatspot Challenge. Ake sibone ukuthi singalimaza yini leli sondo lesikuta.
Kuyashibilika lapha oh ok, ake sibone ukuthi yimuphi umonakalo onawo. Ngiyazi ukuthi kuyahlanya Huh? Sizobona. Kufana nokuncane kakhulu.
Ngiyabona indawo encane eyisicaba, kodwa ngiyayiqonda, kepha manje kufanele siqhathanise, mfowethu. Ngiyazi, nali ibhayisikili lami engilethe kulo indawo eyisicaba. O, uwine, nginqobile, yebo, ikuphi okwami ​​ngokusobala lapha phezulu.
Khona lapho kukhona indawo yami eyisicaba. Indoda yeso lamavila. Kulungile, Steve, phakamisa ibhayisikili lakho.
Ake sibone ukuthi ibukeka kanjani O mfowethu Kubukeka njengejuba elingasindi kulokho engiyikho, ima, okwami ​​kubukeka kuthambile nxazonke. Lokho kubalwa njengefulethi, kunezindawo eziningi eziyizicaba lapho. Kufana nendawo enkulu eyisicaba ebhayisikili.
Yishubhu enkulu nje eyisikwele. Ingabe leyo yindlela obukeka ngayo ngempela? Kulungile, kusuka kumqhele wami kuya kweziyisihlanu ezinhlanu ezinhlanu ezinhlanu. Kulungile ngakho-ke kubukeka sengathi indawo yami eyisicaba iyayenzela usuku lwamavila olubiza umfana wethu uSteven Barlata ukuze abambe iqhaza.
Siyabonga ngokunakekela isandla sami ngenkathi wenza lokhu. Ngikwenzile lokho, ngiyabonga, mfo, nginakekele. Nginawe, sizovumela u-Anders ukuthi naye azame.
Sekuyisikhashana, efuna ukubona ukuthi amafulethi makhulu kangakanani ngenkathi engawathola. Hheyi, vele uqiniseke ukuthi awenzi ibhande. Kulungile Anders Alright Anders uyakwenza ngebhayisikili elisetshenziswe uSteve.
Ngakho-ke ake sibheke ukuthi angathola indawo engakanani lapho ngifika lapha uza masinyane Omunye umfana uzofika azobona ukuthi ungashesha kangakanani futhi abheke ukuthi angathola indawo ethelethi kangakanani i-OhSee, inzima. Ah yehlukile, unendawo encane eyisicaba lapho ngikudlile khona. Yiphuzu lonke lelo.
Ngokwemvelo. Kukhuhlwe khona lapho. Hheyi, beka izindawo eziningi ezicabalele ebhayisikilini njengoba ufuna kuze kushone ilanga.
Kulungile. Wenze kahle mfo. Woza ndoda Ipaki ye-skate manje isivaliwe, sinezingane ezimbalwa ngaphandle silinde abazali bazo ukuthi bazoza bazobalanda leli thuba lokucekela phansi nje ibhayisikili liye phezulu ukuze sikwazi ukuzijabulisa.
Kepha ngiyabonga ngokubuka njengenjwayelo. Nonke niyamangalisa ngokuphelele. Ungikhombise kakhulu.
Uthando esiteshini sami muva nje futhi ngicabanga ukuthi nonke nihle nonke kodwa ngizoqala usuku. Sizokubona ngokuzayo, ngizophuma kamuva
Uyini umgibeli wamabhayisikili wesigaba 3?
3, umgibeli angenza noma ikuphi kokulandelayo: Ukuncintisana emijahweni engama-25 efanelekayo ubuncane bangu-10 abaphezulu kwabali-10 abanezinkundla zabagibeli abangama-30 noma ngaphezulu, noma amaphakethe angama-20 aqeda ngezinkambu zabagibeli abangaphezu kwama-50. Hlanganisa amaphuzu wokuthuthukisa angama-20 esikhathini esiyizinyanga eziyi-12. Amaphuzu anikezwa ngokususelwa eshadini.
Kusho ukuthini i-SS ngebhayisikili?
MTB: IntabaUkuhamba ngebhayisikili.SS:Kungashoizinto ezimbili: Ijubane elilodwa (uma kubhekiswa kumagiya) noma isitayela seSlope (lapho kubhekiswa kuziyalo zokugibela) i-FGFS: I-Fixed Gear Freestyle. I-Fixed Gear: Igiya elikhiyelwe endaweni yalo,incazelokufanele ugwedle ngokuqhubekayo.Agasti 11 2010
Kuyini ukungabi nethonsi lokuhamba ngebhayisikili?
Amaqembu amaningiugibeleare “akukho ukugibela okudonsa”. Lokhu yigibelakuphihhayiumuntu ushiywa ngemuva uma umgibeli engakwazi ukubamba ijubane noma uma benethayi elilungisayo noma eliphantshile.
Kungani abagibeli bamabhayisikili bethi ichapeau?
'Isigqoko'lihumusha ngokuthi' isigqoko 'kepha lisho okungaphezulu kakhulu kwalokho. Kusetshenziselwa ukukhombisa inhlonipho ngomuntu othileabagibeli bamabhayisikiliimizamo, impumelelo noma umzamoIsigqoko! kungukukhulunyelwa phansi kwekepisi. Inhlonipho nesikhuthazo izimfanelo esizithandayoabagibeli bamabhayisikili.
Achama kanjani amabhayisikili?
Abanyeabagibeliima eceleni komgwaqo ukuze uthole i-uchame. I-peloton ingazihlela, ikhethe indawo 'yemvelo break' lapho iabagibelingokuhlanganyelauchame; enkambisweni yeGrand Tour iyala ukuthi umholi we-GC anqume ukuthi lokhu kuzoba nini.
Uyini umgibeli wamabhayisikili wekati 1?
Ukubuka konke kwezigaba zomjaho
Cishe kuzo zonke izimo, futhi noma ngabe isibalo semikhakha yesiyalo,Ikati 1ihlale imelela ukuhlukaniswa kwemjaho kwezemidlalo okuncintisana kakhulu. Ukuze usuke ku-isigaba esisodwakokulandelayo, amaphuzu adinga ukutholwa umgibeli.Meyi 3, 2016
Kusho ukuthini i-CAT 5 ngebhayisikili?
OkujwayelekileIkati 5umjaho:5abafana abasanda kuthenga i-ibhayisikilievikini eledlule,5ama-racers alingene ngokulingene, abafana abambalwa lokhoyenzaImijaho engama-50 ngonyaka futhi ihlale yehliswa umzuzu wokuqala, lowo dude wendawo onemilenze efana noIkati1 ngubani kuphelakuyakwenzaumjaho wakhe wasendaweni kanye ngonyaka futhi uyaphumelela, abafana abambalwa abathikukhonaabasubathi bezinga eliphezulu komunye umdlalo ophaSep 4 2017
Luhlobo luni lwebhayisikili ibhayisikili lomjaho womgwaqo?
Amabhayisikili wokugijima emgwaqeni anikezela ngesipiliyoni esijabulisayo, esisheshayo futhi esimnandi sokuhamba ngebhayisikili futhi aphatha kakhulu futhi asebenza ngokushesha. La mabhayisikili asebenza kahle kakhulu akhiqizwa yimikhiqizo ehamba phambili efana neGiant, Specialised neCannondale. Ngokufana namabhayisikili ajwayelekile omgwaqo, amabhayisikili emigwaqo yokugijima anezimpawu ezifanayo zamathayi amancane enzelwe ukugibela umgwaqo ovulekile.
Yiluphi uhlobo lokuqala lomdlalo webhayisikili wokugibela ibhayisikili?
Uhlobo lokuqala lomdlalo webhayisikili lomjaho libenza ezindaweni ezinzima ezigcotshwe ngethara. Ngokuya ngesimo sakho sokugijima ngebhayisikili ungagijima futhi unciphise ibhayisikili emigwaqweni yomphakathi, umgwaqo owubhuqu noma kumasekethe avaliwe. Kodwa-ke, okutholwe ngentshiseko yobungcweti yokuhamba ngebhayisikili, nansi umjaho wezithuthuthu oyiGrand prix, iligi yokuqala yebhayisikili.
Ngabe ukugijima kwamabhayisikili kwenzeka kuphi emhlabeni?
Umjaho wobungcweti ubudume kakhulu eNtshonalanga Yurophu, ogxile ngokomlando eFrance, eSpain, e-Italy kanye nasemazweni aphansi. Kusukela maphakathi nawo-1980 lo mdlalo wehlukane nezinhlanga zobungcweti manje ezibanjelwe kuwo wonke amazwekazi omhlaba. Imijaho ye-semi-professional kanye ne-amateur nayo ibanjwa emazweni amaningi.